I-45 YEENWELE EZILUNGILEYO ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-45 Iinwele ezilungileyo zeNdoda
Izinwele ezilungileyo zamadoda azisoze zaphuma kwisitayile. Ngapha koko, iinwele ezimnandi kunye neenwele ezilungileyo kufuneka zingapheli, zihambe kakuhle kwaye zishushu. Ukusuka kwikama ukuhla ukuya ekutyibilikeni…
Izinwele ezilungileyo zamadoda azisoze zaphuma kwisitayile. Ngapha koko, iinwele ezimnandi kunye neenwele ezilungileyo kufuneka zingapheli, zihambe kakuhle kwaye zishushu. Isuka e Ikama liphele kwi ubuyele umva engaphantsi kwirhafu, pompadour , icala icala , ebhaliweyo abasebenzi abasikiweyo , Isityalo saseFrance , ifeksi kwaye Itape yokuqhuma , zininzi kakhulu iinwele zamadoda ukufika ngoku.
Nokuba ufuna izitayile zangoku okanye ukusikwa kweklasikhi, jonga ezi zinwele zikhangeleka kakuhle zabafana ukuze zikukhuthaze ukuba uhlaziye inkangeleko yakho kwaye uzame iinwele ezintsha ezintle. Ngento ethile kuhlobo ngalunye lweenwele kunye nobude, uluhlu lwethu lweenwele ezintle zamadoda zibonisa ukusikwa kunye nezitayile kunye neenwele zamadoda zamva nje.
MbiniIkama Ngaphezulu kweTaper Fade
3Izinwele eziQinisekisiweyo ziyafiphala
5Ephakamileyo kunye neTade Fade
6Crew Sika Fade
7Icandelo elinzima leHirstyle
8Isicatshulwa seTextured Modern
9I-Buzz Sika ukuphela
10Ipompo iphela + kwicala elisecaleni
Shumi elinanyeIi-curls ezinde + zangaphantsi kwe-Undercut Fade
12Ukujija okuTshintshileyo kuMva + oPhezulu oPhakamileyo +
13Umdaka omde + uphelile
14Ukuphela kwetempile + Uyilo lweenwele
Shumi elinantlanuUkupheliswa okuphezulu okuphezulu
16I-Faux Hawk + iphela
17Amacandelo amafutshane, i-Hairstyle ende ende
18Mfutshane ngeSpiky Hair Fade
19Ukugqabhuka kokuphela kweMohawk
Amashumi amabiniUkutshiza umva + iTaper Fade
amashumi amabini ananyeMfutshane iPompadour Fade
22Umdwebo weenwele ezinde
2. 3Isivuno esiPhezulu sombala
24I-Spikes zeMessy + iTaper Fade
26Iinwele ezimfutshane eziMdaka + zoLusu luphele
27Ukuphela kweTaper Fade
28Icala leNdlela elilahliweyo leHirstyle + iTaper Fade
29Icandelo Elisecaleni + Ukuphela okuphantsi + komgca ochetyiweyo
30Mfutshane uFehawk Fade
31I-Buzz Fade + Line Up
32Ukucheba kweenwele ezi-Ivy League
33I-Wavy Comb ngaphezulu kwe-Undercut Fade
3. 4Iinwele ezimfutshane + Ukuhamba kweNdalo
36Iinwele eziMiselweyo zoMdaka oPhakathi kwiNwele + engaphantsi
37Mfutshane Crew Sika + Line Up + Razor Fade ephantsi
38Ukwehla kweFade okuKhanyayo okungaphezulu
39Icala leQuiff + elisezantsi
40Iinwele eziMiselweyo eziDibeneyo + eziPhezulu zeTaper Fade
41I-Bald Fade Haircut eneLayini
42Inwele emfutshane kakhulu
Iinwele ezilungileyo ziqala ngo amacala amafutshane, iinwele ezinde eziphezulu kunye nolwahlulo lwesitayile esenziwe ngombala kunye nobumdaka ngokucocekileyo nokuqaqamba. Kukho zonke iintlobo zokuphela kunye neendlela zangaphantsi zendlela emfutshane emacaleni nasemva. Ukudityaniswa kweenwele ezimfutshane, eziphakathi kunye nezinde ngaphezulu, amadoda ayakwazi ukuhombisa iintlobo ezahlukeneyo zeembonakalo. Ekugqibeleni, iinwele ezilungileyo ziguqulela kwiinwele ezintle.
Ukuba ujonga iintlobo zeenwele eziphezulu zonyaka, siqinisekile ukuba uyayithanda le ngqokelela yeenwele ezilungileyo zamadoda!
Njengenye yeenwele ezidumileyo zamadoda, Ikama phezu taper iphele uye wahlala eyintandokazi yokucheba iminyaka. Ngefade ephantsi kunye nolayini kumacala kunye neenwele ezinde ezahlulwe zaya kwicala elinye, isitayile sodidi kwaye sesangoku.
Sebenzisa imveliso yesimbo se-matte njenge-pomade okanye i-wax yokukhupha iinwele zakho zendalo ngelixa ugcina ukubonakala ngathi kukho usuku lonke.
Oku iinwele ezisikiweyo ziyaphela Iinwele zamandulo zamadoda ane curls. Mfutshane kumacala nangasemva ngomphetho omde, le iinwele zikhangeleka kakuhle zenza ukuba kube lula kubafana ukuba bathambise ii-curls zabo kunye nesitayile sokubukeka okuqhelekileyo. Sebenzisa i pomade eyomeleleyo okanye ukhilimu ukunciphisa i-frizz kodwa wandise umthamo kunye nokuhamba.
Oku kulungile slick back undercut iinwele eyamadoda. Inkqubo ye- ukuphela kwendlela emacaleni afumana iinwele zibhuntshe ziye eluswini, zijolise amehlo kwelona lisikiweyo ixesha elide ngaphezulu. Ubuthelezi, isitayile kunye nesimanje, umva omfutshane ulula ukwenza isitayile.
Ephakamileyo kunye neTade Fade
Inkqubo ye- iinwele eziphakamileyo nezomeleleyo ilungele abafana abafuna iinwele ezilula, ezikhawulezayo. Oku kusikwa kubonisa ukuphela okuphezulu kunye nenxalenye esezantsi echetyiweyo, kunye nomgca phezulu ecaleni kwenwele ukuze ucoceke, ujongeke ngokutsha. Isinqumleli esifutshane ngaphezulu sisicatshulwa kwaye ngomsindo twist eyahlukileyo.
Crew Sika Fade
Inkqubo ye- Iqela labasebenzi lisikiwe isinwele esifutshane esihle emadodeni. Kubaqalayo, ukusikwa okucofisiweyo emacaleni kunika umahluko olungileyo. Iinwele ezingqindilili zinqunqiwe ngombengo omde, okukhokelela kwiphikisi ngaphambili. Eli qela lisikiweyo licocekile kwaye libukhali ukuze libukeke abafana .
Icandelo elinzima leHirstyle
Oku kuhle icala iinwele kuba abafana banomdla kwaye bahle. Iimpawu zokucheba iinwele amacala achetyiweyo ngenxalenye enzima isikwe kwizinwele ngaphezulu. Yahlulwe kwelinye icala nangomngxunya ongaphambili, eli cala liphele libhalansi phakathi kwenkwenkwe embi nendoda.
Isicatshulwa seTextured Modern
Inwele ye-quiff iyathandeka kwaye kulula ukuyinxiba kubafana abaninzi. Ukuphela okufutshane emacaleni kudityaniswe noyilo lomgca, kwaye iinwele ezingqindilili zishiywe ziphakathi ukuya kubude kunye namaleya.
Ukuyilungisa le quiff, gxobhoza i-bangs yakho kwaye udibanise zonke iinwele zakho phambili kunye ne-spiked. Sebenzisa imveliso yeenwele zamadoda ezikumgangatho ophezulu kuloo mbala ubonakalayo, nembonakalo yanamhlanje.
Inkqubo ye- ukusikwa kwe-buzz lulungiso olufutshane kakhulu kubafana abafuna ukubonakala ngaphandle komzamo. Inkqubo ye- ulusu luyaphela kwaye ubume bongeza ukongeza okucocekileyo, okusikiweyo okucocekileyo ngelixa iindevu ezipheleleyo zibudoda kwaye zirhabaxa. Amadoda anokubhabha iinwele zawo ekhaya ngeziqhoboshi ezilungileyo.
imigca epholileyo kwizinwele
Ipompo iphela + kwicala elisecaleni
Le nwele imangalisayo idibanisa iindlela ezimbini zakudala- pompadour kwaye icala icala. Idityaniswe nokuphakama ukubuna , intshebe engqindilili, kunye nomgca ochetyiweyo ukugxininisa indawo yendalo, le iinwele zipholileyo ziyaguquguquka kwaye zinestayile.
Ii-curls ezinde + zangaphantsi kwe-Undercut Fade
Zininzi iindlela ezithandwayo zokunxiba iinwele ezisongekileyo. Oku kufiphala kushiya amacala amafutshane kakhulu, kugxininisa isitayile ngaphezulu. Ngelixa ii-curls ezityebileyo kunokuba nzima ukusebenza kunye nokulawula, i-pomade eyomeleleyo okanye i-curl-enhancing cream ingachaza ii-curls kunye nokulwa ne-frizz. Ngapha koko, iinwele ezigobileyo ngokwemvelo zibonelela ngombala owahlukileyo kunye nembonakalo eyenza ukuba naziphi na iinwele zivele.
Ukujija okuTshintshileyo kuMva + oPhezulu oPhakamileyo +
Abafana abaneenwele ezintle bafumana zonke iinwele ezipholileyo. Ukuphela okuphezulu kunye nomgca wokubonelela kubonelela ngesiseko samacala amafutshane alungileyo, iinwele ezinde eziphezulu. Iinwele ezishinyeneyo zitshintshelwe emva ngokwendalo ngokuhamba okukhulu kunye nokuhamba. Ukusikwa okunje ngemfashini kunokwenza isitayile a ikama ngaphezulu , quiff, okanye ndibuyele emva .
Umdaka omde + uphelile
Inkqubo ye- isityalo esinombala iye yaba yindlela yokwenza iinwele yamadoda yamva nje. Ngokucheba iinwele okufutshane, le fringe inde kunye nokuphela kunokubhalwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuboniswa, le nguqulo ibrasha iinwele phambili kwaye masenze i-hairstyle ekhethiweyo idale ivolumu kunye nokuhamba. Abafana banokudibanisa ukunqunyulwa okusikiweyo kunye nomphetho kunye nokufaka isitayile kwinani leembonakalo ezintsha.
Ukuphela kwetempile + Uyilo lweenwele
Ukuba ufuna ngaphezulu kokucheba okunesidima, oku kufutshane ubude beenwele eziphakathi ifaka i-badass temp fade kunye noyilo lweenwele ezipholileyo. I-spiked, i-textured kunye ne-messy phezulu, sincoma kakhulu le ndlela yokusika kunye nesitayela ukuba ucinga ukuba ungashenxisa ukujonga. Khulisa iindevu ezimfutshane okanye usike intshebe ecocekileyo ukuze ulinganise phakathi kweendlela zobudoda nezintle.
Ikama phezu kweenwele qhubeka ube phakathi kweyona nto ishushu iinwele zamadoda kuba zikhangeleka zintle, kulula ukuzenza, kunye nokudibanisa phakathi kobungcali kunye nokungaqhelekanga. Ukuphela kokucheba kweenwele kufikelela kulusu emacaleni, kodwa iinwele ezinde ngaphezulu zandisa umthamo kunye nentshukumo. Isitayile ngemveliso yamadoda yokubamba ephakathi, iinwele zikamiwe kancinci kwisitayile sendalo, esenziwe ngombala.
I-Faux Hawk + iphela
Oku Iinwele ze-faux hawk kwaye iinwele eziphantsi eziphantsi ngomgca phezulu khwaza mihla, sexy kwaye shushu. Isiphatho esigqibeleleyo esilungisiweyo sidibanisa kakuhle, kwaye umgca ochetyiweyo entlonzeni wenza umahluko ocacileyo. Iinwele ezinde ezibukhali zipeyintiwe ukuya embindini ukufumana i-fohawk.
Okokugqibela, uyilo olucocekileyo lweenwele zobuso olugqibezela ukujonga ngomnye ubukhulu. Njengenye ye iinwele ezilungileyo zamadoda kwaye amakhwenkwe , buza i-barber yakho malunga nokufumana le ndlela.
Amacandelo amafutshane, i-Hairstyle ende ende
Umzekelo omkhulu wamacala amafutshane apholileyo, isitayile esiphezulu, oku iinwele ezintsha zamadoda ibonisa iinketho ezininzi zokucheba iinwele namhlanje. I-bald ephantsi iyancipha ifike eluswini nasentanyeni. Ukuphela okufutshane kubalaselisa iinwele eziphakathi phezulu.
Ukuhlanjwa ngomva kunye nokunyuka, ukujonga okuhle kuthatha ithuba lesitayile esityebileyo, esinamandla. Sebenzisa i-matte pomade okanye ukhilimu ngesomisi esibuhlungu ukufumana oko kuhamba kwendalo kunye nentshukumo.
Olunye uluvo oluhle lokucheba iinwele kumadoda ane iinwele ezimfitshane . Ukufiphala kweenwele okucekethekileyo kunqunyulwe kufutshane kakhulu emacaleni ngesikhumba esiphumayo. I-spikes ezityebileyo zibhalwe phezulu ngaphambili nangaphambili ngasemva. Iinwele ezimfutshane kunye neendevu sebenza kakuhle ngokukodwa.
Ukugqabhuka kokuphela kweMohawk
Iinwele zanamhlanje ze-mohawk zikhangeleka zincinci kwaye zi-edgy kune-classic version. Fumana ukuphela okupheleyo emacaleni ukusika iinwele ezimfutshane ezindlebeni nasezantsi entanyeni. I-mohawk emfutshane isebenza ngakumbi kunye nolondolozo olusezantsi.
Ukutshiza umva + iTaper Fade
Njengenye yeenwele eziphezulu zamadoda aselula, iinwele ezibrashiweyo ezinamacala amafutshane zinokubonakala zicocekile kwaye zilungelelanisiwe okanye zingaqhelekanga kwaye zonakele. Ukuphela kwe-tapered kuhleliwe kwaye kuyagcinwa. Sebenzisa imveliso yeenwele zamadoda ze-matte kwaye udibanise iinwele zakho ngezandla zakho kunye neminwe yakho ngesitayile esincinci, esipheleleyo.
Entle iinwele zamadoda ezinenwele ezihlayo . I-pompadour yekhanda elifutshane kunye nefade ephezulu inokubonakala ngathi ayiphikisi kuba isitayile esiqhelekileyo sivelisa iinwele, kodwa kunzima ukuphikisana nobuhle bolu hlobo lwala maxesha.
Umdwebo weenwele ezinde
Umphetho omde (ii-bangs) kunye ne-taper fade haircut inokuba yenye iinwele ezipholileyo zamadoda . Uninzi lwabafana lukhula ngaphandle kweenwele zabo, kwaye esi sitayile sihlelweyo sihamba ngokungalawulekiyo. Amalungu alinganayo skater, surfer kunye ihipsta , iinwele zamadoda ezinobude obude ngaphambili zipholile kwaye zihamba.
Isivuno esiPhezulu sombala
Ukucheba kweenwele eziphezulu zezityalo kuye kwathandwa kakhulu kulo nyaka. Iinwele zezityalo zamadoda ziqala nge-undercut okanye ukuphela kwamacala kunye nokujiya, iinwele ezinde ngaphezulu. Unqumle kangakanani iinwele zakho malunga nesimbo sakho.
Ukuhlanjululwa kunye nokuhlambalaza, abafana kufuneka bafake izicelo eziphantsi ukuya kumodareyitha yokubamba i-pomades, i-waxes okanye i-cream. Ukuba unempilo, iinwele ezikhazimlayo, shiya isitayile sihamba kwaye ujongeka ngokwendalo.
I-Spikes zeMessy + iTaper Fade
Izitayile zomyalezo Ngaba yonke ingqumbo kulo nyaka. Ngeli xesha, sine-spikes ezityebileyo kuyo yonke indawo ngaphambili kunye ne-taper efutshane emacaleni nasemva.
Iinwele ezingaphantsi zihlala zibonakala zintle. Isilinganisi senziwe ngesitayile ukuba sinobungakanani kunye nokuhamba, kwaye indlela emfutshane engaphantsi kunye nokuma kwayo kuyathandeka. Yongeza kwiindevu ezipheleleyo kwaye ufumana isitayile esihle kodwa esithandekayo.
Iinwele ezimfutshane eziMdaka + zoLusu luphele
Icala leNdlela elilahliweyo leHirstyle + iTaper Fade
indlela yokufumanisa inyanga yakho kunye nophawu olukhulayo
Icandelo Elisecaleni + Ukuphela okuphantsi + komgca ochetyiweyo
Mfutshane uFehawk Fade
I-Buzz Fade + Line Up
Ukucheba kweenwele ezi-Ivy League
I-Wavy Comb ngaphezulu kwe-Undercut Fade
Iinwele ezimfutshane + Ukuhamba kweNdalo
Iinwele eziMiselweyo zoMdaka oPhakathi kwiNwele + engaphantsi
Mfutshane Crew Sika + Line Up + Razor Fade ephantsi
Ukwehla kweFade okuKhanyayo okungaphezulu
Icala leQuiff + elisezantsi
Iinwele eziMiselweyo eziDibeneyo + eziPhezulu zeTaper Fade
I-Bald Fade Haircut eneLayini
Inwele emfutshane kakhulu
iinwele zamadoda akubudala obuphakathi